Falanqeyn: Haddii Dayax Yimaado Xidig Waxba Ma Ifiyo! | AllPuntland.net	Monday, March 27th, 2017	Home
Falanqeyn: Haddii Dayax Yimaado Xidig Waxba Ma Ifiyo!
Jan 11, 2017 - jawaab	Doorashadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya ayaa ahayd mid saamayn xooggan yeelatay, waxayna calaamatu su’aal saartay cida noqon karta Madaxweynaha Soomaaliya.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo taageero ka helay dhamaan Xildhibaanada ayaa noqday Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna helay Aqlabiyadii uu u baahnaa Wareegga 1-aad ee Doorashadda.
Jawaari wuxuu taageero ka helay Xildhibaanada Waqooyi Galbeed, Puntland, Jubbaland iyo Xildhibaano kale oo kooban oo kaso galay Baarlamaanka Jowhar iyo Cadaado.
Xildhibaanada beesha Daarood ayaa kaso horjeeday in Xidig uu noqdo Guddoomiye, waxaana jira Musharixiin Miisaan leh oo kaso jeeda Daarood oo doonaya inay noqdaan Madaxweyne, kuwaas oo Ol’ole u galay inuu Xidig meesha ka baxo.
Jawaari iyo Xidig mar labaad ayay isku arkeen fagaaraha tartanka, waana markii labaad oo Jawaari uu guulaysanayo.
Maxamed Sheekh Cismaan ayaa ka waya-aragsan, kana galangal badnaa Jawaari, waana tan keentay in Xidig uu mar kale qaado Wadadii fashilka iyo dhamaadka.
Cabdi Rashiid Xidig oo taageero ka helayay Itoobiya, Shariif Xassan iyo Xildhibaano kooban oo DAMU-JADIID ah ayaa mar kale ka dhacay jaranjarada Siyaasadda.
Laakiin markaan wuxuu qaaday waddo la yaab leh, wuxuu maanta sheegay inuu noqonayo hormuudka isbadalka, uuna doonayo in Soomaaliya uu isbdal ka dhaco Kuraasta hartay.
Waxaa dadka Siyaasadda faaleeya ay u arkeen in Xidig uu fariintan u diray Xassan Sheekh ujeedadeeduna ay tahay inuu ka qayb qaadanayo sidii DAMU-JADIID ay u fashulmi lahayd.
In kasta oo Jawari uu guulaystay, hadana waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa nin an ku adkayn Sharciga, isla markaana qaata wax kasta oo Madaxtooyada looga soo yeeriyo.
Doorashadda maanta dhacday waxay muujisay in Xildhibaanadu ay doonayaan isbadal inuu dhaco, waxaana la saadaalinayaa laga bilaabo maalinta bari oo la dooran doono Guddoomiye ku xigeenka 1-aad iyo 2-aad ee Baarlamaanka inuu bilaabanayo isbadalku.
Ugu Dambayntii Maanta Xaaladu waxay isugu biya shubatay meel Dayax joogo Xidig waxba kama ifiyo oo macnaheedu uu yahay in Dayax uu noqday Jawaari.